एजेन्सी । यस वर्ष कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलको उपाधि कुन देशले जित्ला ? विश्व फुटबलका अधिकांश ठूला देशहरू प्रतियोगितामा छनौट भइसकेका छन् । पूर्वच्याम्पियन इटाली भने लगातार दोस्रोपटक विश्वकपमा छनौट हुन असफल हुँदा यसबाहेक अन्य सबै हेभिवेट देशलाई कतार विश्वकपमा देख्न पाइने पक्का भएको । विश्वकप नोभेम्बर २१ देखि डिसेम्बर १८ सम्म आयोजना हुँदैछ ।
त्यसो भए फाइनलको कसले जित्ला ? सुपरकम्प्युटरका अनुसार कतार विश्वकपको उपाधि फ्रान्स र बेल्जियम मध्ये कुनै एक देशले जित्न सक्छ । रोनाल्डोको देश पोर्चुगल सेमिफाइनल पुगेको अवस्थामा फाइनल पुग्ने सम्भावना ३४ प्रतिशत रहन्छ भने मेस्सीको देश अर्जेन्टिना फाइनल पुग्ने सम्भावना केवल ९ प्रतिशत मात्रै रहेको भविष्यवाणी छ ।
बेइजिङ ओलम्पिक : अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था पतनको सन्देश